Gen. Indha Qarshe “Shabaab waxay la yimaadeen Diin cusub oo dadka lagu dilo” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Gen. Indha Qarshe “Shabaab waxay la yimaadeen Diin cusub oo dadka lagu...
Gen. Indha Qarshe “Shabaab waxay la yimaadeen Diin cusub oo dadka lagu dilo”
Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe) oo shalay xilka kala wareegay Taliyihii hore Gen. Gorod ayaa wuxuu sheegay inta uu xilka hayo inuu dhisayo ciidan mideysan oo la dagaalama Shabaab, islamarkaana soo celiya nabadda.
Wuxuu sheegay hadii aan nabad la helin inaanay jiri karin horumar iyo amni, sidaasi darteedna la soo dhisayo ciidan awood u leh inay dalka ka xoreeyaan Ururka Al Shabaab.
Gen. Indha Qarshe ayaa wuxuu kaloo sheegay in Shabaab ay yihiin burcad diimeed, islamarkaana ay la yimaadeen Diin cusub oo dadka lagu dilo.
Wuxuu sheegay ciidanka xoogga inay masuul ka yihiin difaaca dhulka, cirka iyo badda, isaga oo sidoo kale u mahadceliyay ciidanka AMISOM oo dhiigooda u huray shacabka Soomaaliyeed, maadaama ciidan ay uga dhinteen Soomaaliya.
“Shabaab waa burcad Diimeed, waxay la yimaadeen Diin cusub oo dadka lagu dilo, qofka islaamka ah dadka way ka nabad galaan, nimankaas aan dalkeena ka xoreyno, waana u diyaar garownay, waxaan u mahadcelinaya ciidanka AMISOM oo gacan weyn naga siiya la dagaalanka Al Shabaab, waxay dhiigooda u hureen shacabka Soomaaliyeed”. Ayuu yiri Gen. Indha Qorshe.
Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Gaas (Indho qarshe) ayaa xilkan uu shalay la wareegay horay u soo qabtay intii u dhaxeysay sanadihii 2013-kii ilaa 2015-kii.